Blog - Sheng Da Food Service
OPEN DAILY -9: 00 AM TO5: 30 PM
Special Flour & Premix
Flavour & Color
Ingredients & Chemical
Other Packed Food ( Spice, Filling, Paste, Powder )
Beverage Ingredient and Packing
Meat Floss & Frozen Meat
Other Non Foods
ပစ္စည်းအမျိုးအစားစုံလင်ပြီး မုန့်ဖုတ်သမားတိုင်း နှစ်ခြိုက်တာ Sheng Da Food Service ပါ
မုန့်ဖုတ်သမားတိုင်းအတွက် ဈေးနှုန်းချိုသာ သင့်တင့်ပြီး မုန့်ဖုတ်တဲ့ပစ္စည်းနှင့် ပတ်သက်လျှင် မွှေစက်မှ အစ Packaging အထိ အစုံရှိတဲ့ တစ်နေရာထဲမှာ One Stop Service ပေးနေတဲ့ [...]
ဒီနေ့မှာတော့ ပေါင်မုန့်ကို အထူးနူးညံ့စေတဲ့ Sheng Da Bread Flour နဲ့ ပြုလုပ်ထားသော Fluffy Bread လုပ်နည်းလေးမျှဝေပေးချင်ပါတယ်နော်ပြုလုပ်နည်းလေးကတော့. ပေါင်မုန့်ဂျုံမှုန့် ၂၅၀ ဂရမ်. [...]
ဆီ (၇) မျိုးအကြောင်း
၁. ကန်နိုလာဆီကန်နိုလာဆီဟာ မုန့်ဖုတ်ဖို့ အကောင်းဆုံးဆီတစ်မျိုးပါ။ အခြားဆီတွေနဲ့ယှဉ်ရင် ပိုကောင်းတဲ့အနံ့အရသာရှိလို့ မုန့်ဖုတ်တာမှာ သုံးကြပါတယ်။ ဖုတ်လို့ရလာတဲ့မုန့်ရဲ့ အနံ့အရသာပုံစံတွေကိုလည်း မပြောင်းစေပါဘူး။ ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း ညီညွတ်တဲ့အတွက် မုန့်ဟာအရသာလည်းရှိ၊ ကျန်းမာရေးကိုလည်း [...]
သင့်အိမ်မှာ မိသားစုနဲ့ မုန့်လုပ်စားဖို့ပဲဖြစ်စေ၊ လူတွေကို ပြုံးပျော်စေဖို့ အရသာရှိတဲ့ မုန့်တွေဖုတ်ချင်သည်ဖြစ်စေလိုအပ်တဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်း၊ ကိရိယာတန်ဆာ အစုံအလင်၊ ဘူးဒီဇိုင်းမျိုးစုံ ဆိုဒ်စုံ ၊ ပေါင်မုန့်အိတ်မျိုးစုံ ကို [...]
အလူမီနီယံ ထမင်းဘူးလေးအဖုံးမှာ ကိုယ်ပိုင်တံဆိတ်အပြည့်ကပ်တော့ ဝေဟင်ပေါ်ကကျွေးတဲ့ အစားအစာလိုပေါ့ ..မှာစားတဲ့သူကလည်း မီးဖိုပေါ်တင်နွှေးရုံပဲ ..ကဲ .. ပလတ်စတစ်မဟုတ်တော့ .. ဘယ်လောက်အဆင်ပြေလဲ …In stock နေတာကြာပြီနော် [...]
In Stock မှာရတာအဆင်ပြေအောင်ရှိတဲ့အအေးဘူးအိတ်လေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်သင့်အိမ်မှာ မိသားစုနဲ့ မုန့်လုပ်စားဖို့ပဲဖြစ်စေ၊ လူတွေကို ပြုံးပျော်စေဖို့ အရသာရှိတဲ့ မုန့်တွေဖုတ်ချင်သည်ဖြစ်စေလိုအပ်တဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်း၊ ကိရိယာတန်ဆာ အစုံအလင်၊ ဘူးဒီဇိုင်းမျိုးစုံ ဆိုဒ်စုံ [...]
ပန်းကန်ပြားလိုလဲဖြန့်လို့ရတယ်။ စားမကုန်ရင်ခွက်လေးလိုပြောင်းပြီး အဖုံးနဲ့အုပ်လဲရတယ် .. ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ …စားမကုန်လို့ ဒါလေးပါဆယ်ထုတ်ပေးပါလား … မလိုတော့ဘူး In Stock !!!မှာရတာအဆင်ပြေအောင်ရှိတဲ့ ရှိတာလေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်သင့်အိမ်မှာ မိသားစုနဲ့ [...]
ပစ္စည်းအမျိုးအစားစုံလင်ပြီး မုန့်ဖုတ်သမားတိုင်း နှစ်ခြိုက်တာ Sheng Da Food Service ပါ Comments Off on ပစ္စည်းအမျိုးအစားစုံလင်ပြီး မုန့်ဖုတ်သမားတိုင်း နှစ်ခြိုက်တာ Sheng Da Food Service ပါ
How To Make Fluffy Bread Comments Off on How To Make Fluffy Bread
ဆီ (၇) မျိုးအကြောင်း Comments Off on ဆီ (၇) မျိုးအကြောင်း
Transparent Cake Box Comments Off on Transparent Cake Box
အလူမီနီယံ ထမင်းဘူး Comments Off on အလူမီနီယံ ထမင်းဘူး
No.1223, Yadana Rd, In front of Malikha Garden Housing,
South Okkalapa Tsp, Yangon, Myanmar.
Order Phone : +959976879338
Office Phone : +959972271969,+959 5023093
Copyright © 2022 All Rights Reserved. Created by